အသုံးပြုသူကို Google Analytics တွင်ထည့်သွင်းနည်း Martech Zone
အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ထပ်ထည့်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုသင်မပြုလုပ်နိုင်ပါကသင်၏ဆော့ဝဲလ်၏အသုံး ၀ င်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာအချို့ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ Google Analytics။ တကယ်တော့ငါတို့ကိုဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက်ဒီပို့စ်ကိုရေးတာပါ။ သုံးစွဲသူတစ် ဦး ထည့်ခြင်းသည်အလွယ်ဆုံးအလုပ်မဟုတ်ပါ။
ပထမ ဦး စွာ၊ Google Analytics သည်လမ်းညွှန်မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အောက်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့ထားသော Admin သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်သင့်အားသင်၏အကောင့်များအတွက်လမ်းညွှန်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ သင်အသုံးပြုသူထည့်လိုသည့်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ၊ ပြီးနောက်နှိပ်ပါ အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှု.
၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားလုံး၏စာရင်းပါသောဘေးဘားတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ အပေါ်ညာဘက်ရှိအပြာရောင် + သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါကသင်ထည့်နိုင်သည် အပိုဆောင်းအသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်ထားကြ၏.
သင်သည် Webmaster နှင့် Google Analytics တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထည့်သွင်းထားပါကခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါအခုသူတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးရန် optional ကို checkbox ကိုလည်း check လုပ်ပါ။
Tags: analytics googlegoogle analytics အသုံးပြုသူဂူဂဲလ် analytics အသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်google tag မန်နေဂျာgoogle webmaster များ+ googleဘယ်လိုအသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှု
Blockchain သည် E-Commerce စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပြောင်းလဲမှုကိုမည်သို့လောင်စာပေးမည်နည်း
ဧပြီ 13, 2011 မှာ 4: 26 AM
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးစားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအတွက် virtual assistant ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ လည်ပတ်သူအရေအတွက်၊ လည်ပတ်သူမရှိခြင်းစသည်တို့ကိုရှာဖွေရန် Google ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကို စတင်အသုံးပြုထားပါသည်။ အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်ဖောက်သည်တစ်ဦးအတွက် ဤစာကို သင်ရေးထားသော်လည်း ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပိုအသုံးဝင်ပါသည်။
17:2012 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 21 တွင်
မေးခွန်းတစ်ခုမေးလို့ရမလား။ ရွေးချယ်ရန် ပရိုဖိုင်များ မရှိပါက ကျွန်ုပ် ဘာလုပ်နိုင်မည်နည်း။ ပရိုဖိုင်များ မရနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အသုံးပြုသူအသစ်ကို ဝဘ်ဆိုက်၏အကောင့်သို့ ထည့်၍မရနိုင်ပါ။ ဘယ်ကော်လံကနေ ညာဘက်ကော်လံမှာ ပရိုဖိုင်ကို ဘာကြောင့် ထည့်လို့မရတာလဲ သိလား။